ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ဂွိုဟျတှနေဲ့သင်၏မေတ္တာ Destiny ကိုခန့်မှန်းနိုင်ပုံ
အားဖြင့် NIC Gaudette
ဂွိုဟျတှနေဲ့သင်၏မေတ္တာ Destiny ကိုခန့်မှန်းနိုင်ပုံ
နက္ခတ်ဗေဒင်အတွက်, တစ်ဦး Natale ဇယားဟုခေါ်ရာတစ်ခုခုလည်းမရှိ. ဒါဟာဂြိုဟ်နှင့်အခြားနက္ခတ်အမျိုးသားအပေါင်းတို့ခင်ဗျားမမွေးဖွားခဲ့ကြတည်နေရာမှသင်၏မွေးဘွားရာယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ကြ၏ရာသီခွင်မှာအခြေခံအားဖြင့်နေရာအတိအကျတစ်ခု snapshot ကယ်. ဒါဟာမြေပုံတူင်, သင့်ရဲ့စရိုက်ကိုထွက်တင်သောနှင့်သင့်အသက်တာ၏အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်၌သင်ဘာလိုချင် / လိုအပ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်. လူတိုင်းသည် Venus တို့သည်အချစ်ကမ္ဘာဂြိုလ်ကြောင်းသိတယ်, သူသည်သင်၏မွေးဘွားမှာတည်ရှိပြီးရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာသင်သည်မေတ္တာတရားကိုဘာလိုအပ်တယ်သို့ထိုးထွင်းဉာဏ်ကိုပေးနိုင်ပါသည်. သင့်ရဲ့ဗီးနပ်စ်သင်နှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သို့ဆိုပါဘူး? (သင်သည်သင်၏ Venus နိမိတ်လက္ခဏာကိုတွေ့ရှိဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ).
Aries အတွက် venus: သင်နဲ့အကျိုးစီးပွားကိုင်ထားနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သင်အစာရှောင်ခြင်းအပေါ်ရွှေ့. သူတို့ကသင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကိုက်ညီသင့်ပါတယ်, အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်. သင်သည်များစွာသောအလားအလာ suitors ကိုဆွဲဆောင်နိုင်, သင်ဘာလိုချင်အပေါ်အာရုံစိုက်မယ့်လျှင်မူကားသင်သည်အလျင်အမြန်သူတို့ကိုရှောက်သွား. သင်အမြဲကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ခံစားချက်ရှိသည်ဖို့ပြင်းထန်သောလိုအပ်ချက်အတိတ်ရရန်ရှိသည်.
Taurus အတွက် venus: သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်တည်ငြိမ်သောတာဝန်ရှိလိုအပ်ပါတယ်. သူတို့ရိုင်းနဲ့အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့ဆိုရင်, သင်ကတခြားနည်းလမ်းနဲ့ run လိုက်တာ. သင်တို့သည်အသက်ကိုအတွက်အနုစိတ်သောအရာနှင့်အနည်းငယ် spoils သူတစ်ဦးချင်ပါတယ်, နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ကာမဂုဏ်သဘာဝနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သူ. အဖော်ရွေးချယ်တဲ့အခါသင့်ရဲ့အချိန်ကြာ, စုစုပေါင်းကတိကဝတ်တောင်းဆို. လွန်းပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်မနာလိုဝန်တိုဖြစ်ရခြင်းအတွက် watch.
Gemini အတွက် venus: သင်တို့ရှိသမျှသည်အခြားမည်အထက်တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွလိုအပ်ပါတယ်. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးစကားပြောဆိုရှိသည်မဟုတ်နိုင်လျှင်, သင်သည်လှည့်လည်လိမ့်မယ်. သင်သည်စိတ်ဝင်စားဖို့သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်, တစ်ဦးဉာဏအမျိုးအစား, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးသင်ထက် grounded သောသူသည်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုယ့်ကိုငြိမ်သက်နှင့်သင် corral နိုင်. သင်သည်ကိုယ်ကိုထက်အသက်ငယ်သူတစ်ဦးဦးအတွက်အသွားနိုင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထက်အသက်ငယ်ပြုမူသူကို.
ကင်ဆာအတွက် venus: သင်တို့ရှိသမျှသည်အခြားမည်သူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူအထက်တစ်ခုစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ပါတယ်. သင်သည်အစိတ်ပိုင်းကိုသင်ဖွင့်နိုင်တဲ့သူတစ်ဦးမိတ်ဖက်ချင်တယ်, သင့်ကိုထောက်နှင့်အားပေး, ဒါပေမယ့်လည်းသင်တို့၏သက်သာဇုန်ပြင်ပသင်တွန်းအားပေးပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်ဤမျှမကြာခဏတိုင်းသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအချို့သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုမသောက်ပါကဆက်ဆံရေးကိုမှိုင်းရနိုင်. သင်ဆက်ဆံရေးတွင်မိဘတစ်ဦးဖြစ်ဘို့သဘောထားကိုစောင့်ကြည့်.
Leo အတွက် venus: သင်သည်ဆက်ဆံရေး၌ star ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်လိုအပ်သည့်အာရုံစူးစိုက်မှု, ချီးမွမ်းခြင်းကိုပေးမည်သူတစ်ဦးမိတ်ဖက်ချင်တယ်. သင်သည်မေတ္တာတရားကိုအချိန်များတွင်အနည်းငယ်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့နိုင်ပါတယ်, သင်မူကား, အဖြစ်ကောင်းစွာပူနွေးနဲ့အသည်းအသန်များမှာ, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အပေါ်သစ္စာ. သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်းတ္ထုတစ်ပုဒ်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ထဲကနေတစ်ခုခုကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မေတ္တာလိုချင်တယ်, နှင့်သိပ်ရင်ခုန်စရာများမှာ.
Virgo အတွက် venus: သင်သည်လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်, သူနဲ့သင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူပါစေ. ရွေးချယ်ရာတွင်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူဖြစ်အခါသင်အဆောတလျင်မခံလိုကြဘူး, နှင့်သေချာကြောင့်ပထမဦးဆုံးညာဘက်င်ဖြစ်စေလို. သင်သည်မေတ္တာတရားကိုအနည်းငယ်ရှက်တတ်စေနိုင်ပါတယ်, နှင့်ပထမဦးဆုံးပြောင်းရွှေ့စေခြင်းငှါသူတို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်. သင်ဟာဆက်ဆံရေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည့်တဲ့အခါသင့်ရဲ့အာရုံကြောသက်သာရုံသက်သာနိုင်သူတစ်ဦးမိတ်ဖက်လိုအပ်ပါတယ်.
Libra အတွက် venus: သင်အလေးအနက်ကတိကဝတ်ယူသောသူတစ်စုံတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်, သင်သေချာကျင့်သောကြောင့်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, သင်ကြီးထွားလာရန်ဆက်ဆံရေးအတွက်နေရာလွတ်တစ်ခုအချို့ငွေပမာဏရှိသည်ဖို့လိုအပ်, နှင့်သင်ဆက်ဆံရေးအမြဲပိုကောင်းရနိုင်ကြောင်းနာ​​းလည်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်ချင်တယ်. သင်သည်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့် chivalry နားလည်သဘောပေါက်, နှင့်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူတစ်ခုနှင့်တန်းတူအဖြစ်ဆက်ဆံစေလို.
Scorpio အတွက် venus: သင်သည်အသည်းအသန်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးလိုအပ်ပေမယ်မူသောသင်တို့အပြင်းထန်မှုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်, သင်သည်မေတ္တာတရားကိုအချိန်များတွင်ကျြရနိုင်သောကြောင့်. သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှ smother သို့မဟုတ်တွယ်ကပ်နိုင်, ကိုထိန်းချုပ်ပြုမူသို့မဟုတ်သူတို့ကိုကြိုးကိုင်, ဒါကြောင့်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူဖြစ်ခြင်းရှေ့ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်သို့မဟုတ်သင်သွားသောသူတို့ကိုတွန်းအားပေးပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်အားကြီးသောပုံပေါက်သူကိုအင်အားကြီးသောလူမျိုးအားဆွဲဆောင်ပါတယ်.
Sagittarius အတွက် venus: သင်သည်စွန့်စားမယ့်သူတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်, ရဲရင့်, သင်နှင့်အတူရယ်မောနိုင်. သင်လည်းအလေးအနက်မေတ္တာကိုမခံမယူကြဘူး, ဒါကြောင့်သင်မေတ္တာနှင့်ပိုမိုလက်တွေ့ကျမယ့်သူတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်, နှင့်သင်အလွန်အကျွံလွှဲမသွားပါစေလိမ့်မယ်. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ connection တစ်ခုလိုအပ်သည်, တစ်ခုနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာတမှတ်မိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအရေးကြီးပါတယ်. ဒီအနေအထားဟာထာဝရလူပျိုကြီး / bachelorette ပြသနိုင်.
capricorn အတွက် venus: သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကရင့်ကျက်ရန်လိုအပ်, တာဝန်ရှိသော, မေတ္တာအပြည့်နဲ့တစ်ဦး bit နဲ့အစဉ်အလာ. သင်အောင်မြင်နေသောလူအပေါင်းတို့အားဆွဲဆောင်ပါတယ်, အောင်မြင်သို့မဟုတ်အသက်တာတွင်အမြင့်မားအဆင့်အတန်းအောင်မြင်ရေးအတွက်မိမိတို့လမ်းပေါ်ကြပြီ, နှင့်သင်အဟောင်းတွေမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်သွားနိုင်ပါတယ်. သင်တို့သည်ဤမျှအစဉ်အလာပါတယ်ကတည်းက, ဆက်ဆံရေးသိုးမရပါဘူးဒါကြောင့်သင်တချို့အမွှေးအကြိုင်ကိုရောက်စေမည်သူတစ်စုံတစ်ဦးကသုံးလို့ရတယ်.
သုံးလုံးအနီးကပ်အတွက် venus: သင်သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့သူတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်, တစ်မူထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိတယ်, နှင့်သင် Intellectual ကိုက်ညီမှု. ပထမဦးဆုံးသူတစ်ဦးဦးနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့သင်တို့, နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမေတ္တာသည်စုံလင်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုခံစားရတယ်. အဆိုပါပြဿနာဖြစ်ပါတယ်, သင်ချစ်ကြည်ရေးထက် ကျော်လွန်. သွားခဲယဉ်းအချိန်ရှိနိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်စိတ်ခံစားမှုသင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်ဆောင်ခဲ့မည်သူတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်.
Pisces အတွက် venus: သင်သည်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်, သင်အန္တရာယ်ကျရောက်ခံစားရတဲ့အခါသင်အကာအကွယ်ပေးလိမ့်မယ်, သင်တို့အမှု၌အားသာချက်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. သင်သည်သင်ချစ်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်တစုံတခုလုပ်ပေးမယ်, အလွယ်တကူကြောင့်ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နိုင်. နှလုံးမှာအဲဒီလိုစိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ခြင်း, သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးထက်ပိုသောလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် grounded လိုအပ်ပါတယ်. သင်သည်အနုပညာအမျိုးအစားများကိုဆွဲဆောင်ပါတယ်.